Help abdimajid recover from attack – Gargaar.com
Help abdimajid recover from attack
Help abdimajid recover from attack in Gobolka Somalia shanaadl
Gabow Adam Created 1 Project
Step 1: Specify your contribution amount for Help abdimajid recover from attack
Contribution Level Help abdimajid recover from attack
<iframe frameBorder="0" scrolling="no" src="https://www.gargaar.com/?ig_embed_widget=1&product_no=4" width="214" height="366"></iframe>
Help abdimajid recover from attack in Gobolka Somalia shanaad.
Walaalkeey abdimajid jamacada mekele universtie ayuu dhigan jiray bachelor. Ciidii soonka gadaasheed ayuu jamacada soo dhameeyey.
Asaga oo faraxsan oo reerka hooyadiis U soo socdo, oona gaaray guul xaga waxbarashada oo faraxsan.
Ayaa dhibaato qabsatay markii uu imaaday nagele , ethiopia. Buss ayuu la soo raacay Addis Abeba ila nagele .
Marka uu imaaday nageela borama ayuu xagaa joogay hal haween . Galabtii ayuu rabay in uu babuur kale soo raaco sidii xagaa dollo U imaado. Boostajada asaga oo kusugaayo baabuurka waxaa ku soo baxay Orom badan oo ciil u qabtoo somali , iyagoo budad wato. Waxeey kula hadleen afka oromada asagana waxuu ugu jawaabay af amxaari. walaalkeey asaga oo ka filaneeynin ayeey budadka la dhaceen oo weey ku joogjogsadeen. Iyaga oo rabo in eey dilaan oo goowracaan ayuu ilaaheey subxanu watacalaa ka fakiyey.
Asagoo jirdilan oo dhibateeysan ayuu la soo cararay oo xaga askarta soo eeday .
Shandadii dharka iyo wax Alaa waxuu watay ayeey ka qaateen
Shahadooyinka iyo passaporka , lacag yar oo watay waa laga qaatay.
Hada lacag xataa uu isbitalka ku tagoo ma haaystoo, waxuu xataa U baahanyahay shahaadooyinka dib in uu uraadiyo oo hada iyo safar cusub oo ku tagoo jigjiga ilaa Addis Abeba, iyo jamacadii mekelle universety.
Walaal yalaal igu caawiyo , yarkaa sidii rajadii wax barasho ugu soo Cilin leheen Ana daaweeyno. Aad ayuu U dhibateeysanyahay maskiinka waana U walwalaa.
Hope you are better brother.
Allaah haa kuu sahlo walaal.